On 10/27/2016 (IST)
Ugu horeyn waxaa FACEBOOK fariin kuugu soo diraya shaqsi aadan aqoon u lahayn oo 100%99 dumar ah,aad u qurux badan isla markaana xiran dhar qof walba oo dhalinyara ah soo jiidanaya,inta badan waxaa lagu gartaa iyadoon asxaab badan aan lahayn,dhowr sawirna ay ku jiraan dhanka profileka ee FCB.
Dhanka SKYPE sheekada waxay ku bilaabataa qaabka sawirada hoose oo inta badan ah COMPUTER si automatic ah kuugu jawaabaya.
Dhalinyaro aad u farabadan ayaa arimahan ay ku dhacday,iyadoo kuwa qaarkood ku sigtay in ay is dilaan,iminka waxaan idin soo bandhigynaa arin ku dhacday shaqsi dhalinyaro ah oo u dhashay wadanka FALASTIIN oo qurba joog ah,waxaa wareysi aad u dheer arintan kala yeelatay BBC. "DIGNIIN"qoraalka aan tarjunay waxaa la socda ereyo dad qaarkood aan ka heli doonin.
Magaceygu waa SAMIR,habeen anigoo keligay guriga jooga ayaa waxaa igu soo darsatay FACEBOOK gabar aad u qurux badan,runtii waxba uma arkin,waayo asxaabteydii hore oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa mar walba igu soo darsada anigoo ilooway sida ay u eg yihiin ama magacooda.
Maalintii ku xigtay si qaas ah ayay MESSAGE "fariin" iigu soo dirtay,iyadoo tiri "Hi,how are you? I saw your profile and I liked you."taasoo ah sawiradaaada ayaa eegay waana ka helay,markii aan eegay boggeeda FACEBOOK waxaan arkay in ay tahay gabar aad u qurux badan oo runtii isoo jiidatay.
Isla habeenkaa waxay iga codsatay SKYPE in aan soo galo,iyadoo ii sheegtay in ay tahay 23 jir,waalidkeeda ay dhinteen,waxay kula nooshahay walaasheed ka weyn magaalada SIDON ee Koofurta LIBNAAN,waxay ii sheegtay in CAAJIS uu ku batay ama BORING ay dareemeyso marwalba waayo wax ma barato,ma shaqeyso,walaasheedna waa qof aad u dhib badan oo waxba u ogolayn.
Waxaan weydiiyay waxa ay ka hesho ama HOBBY u ah,isla markiiba waxay ku jawaabtay SEX!,qalbigeyga 4 saac kama baxo ayay igu tiri,shaki yar ayaa i galay waayo qof aadan aqoon dheer isku lahayn oo si fudud uga hadleysa SEX way ila adkaatay,laakiin waxaan is iri sheekada ha qasin,saaxiib ayaan leeyahay,laakiin xiligaa magaalada safar ayay kaga maqnayd,waan yara caajisnaa waxaan is iri iskala sheekeyso,eeg waxa dhici doona.
Waxay i weydiisay in aan leeyahay WEBCAM ama KAAMERADA layska daawado,hore ayaan k shiday anigoo isla markaa weydiiyay in ay shido teeda,indhaheyga waa rumeysan kari waayeen,waxay ahayd runtii gabar aad u qurux badan oo xiran dhar qafiif ah oo wax walba ay muuqdaan,hadii si daacad ah aan u hadlo maskaxdeyda waxay noqotay mid aad u yar oo qaabka loo fikiro oo dhan ay ka luntay markii aan arkay iyadoo si toos ah ama LIVE ah ii hor fadhida.
Qoraal ayaan waqti dheer ku wada hadalnay,markii aan iri waxaa doonayaa in aan codkaaga maqlo waxay iigu jawaabtay walaashay ayaa qolka kale ku jirat ee ma doonayo in ay i maqasho,taasoo aan rumeystay,waayo waxay hore iigu sheegtay in walaasheed ay tahay shaqsi aad u xirxiran oo aan aqbalin waxyaabaha qaarkood.
Waxay ii soo qortay in markii aan la hadlayo ay aad u KACSATO!,waxaa is iri waxay ku nooshahay SIDON oo ah meel geri go'an ah oo gabadhaha aan loo ogolayn in ay saaxiib yeeshaan,waxaa laga yaabaa in ay tahay qof u baahan SEX isla markaana aan heli karin.
Ka dib waxay ii soo qortay "MA I TUSI KARTAA GUSKAAGA" isla markiiba hore ayaan ka tusay,waxaan ku iri adigana ma i tusi kartaa!?iyadoo dharka iska bixineysa oo sariirta saaran isla markaana SIIGEYSANEYSA "masturbating" ayay kaameradii ku aadisay,runtii waxay ahayd arin aan aad ula dhacay anigoo is iri waxaad si fudud ku heshay gabar aad u qurux badan iyo raaxo.
Isla markiiba waxaan hore ka bilaabay in aan SIIGEYSTO,waxay igu tiri wejigaaga i tus waayo aad baan ugu raaxeystaa markii aan arko WEJIGA qofka siigeysanaya,Kamerada ayaan mar ku aadiyaa marna guskeyga,iyadoo dhankeeda aan ka arko in ay aad u kacsatay "orgasm",runtii araga video iyo qoraalka ma ahee weli codkeeda ma maqlin.
Iyadoo weli qaawan ayay waxay ii soo qortay halkeed ku nooshahay,maxaad ka shaqeysaa?waxaan ugu jawaabay in aan ka shaqeeyo MARKETING "suuq geynta"shirkad Talyaani ah oo ku taal magaalada MILANO.
Waxay tiri TAAJIR BAAD TAHAY SOW MA AHAN?,waxaan ugu jawaabay WAX LA'AAN WAA DHAAMAA!.
Ka dib waxay soo qortay shanqar ayaan maqlayaa waa walaashay ee NABADAY iyo markale,dharkii ayay xiratay kaameradiina way damisay!.
1 saac ka dib waxaa fariin iigu soo dhacday FACEBOOK,waxaa ku qornaa "waxaan ahay nin oo kaa duubay adigoo siigeysanaya"wuxuu ii soo diray VIDEO anigoo siigeysanaya,wuxuu fariinta soo raaciyay,waxaa hayaa dhamaan magacyada asxaabtaa iyo qoyskaaga,hooyadaa,walaashaa,walaalkaa,ila adeeradaa iyo gabadha aad jeceshahay,waxaan ku siinayaa 1 asbuuc si aad u soo dirtid 5000 EURO hadii kale waxaan si toos ah ugu dirayaa VIDEOWGA aan kaa duubay.
Runtii argagax ayaa igu dhacay,ugu horeyn waxaa qalbigeyga ku soo dhacay u dir lacagta,laakiin waxaan BLOCK saaray SKYPE iyo FACEBOOK,wax yar ka dib wuxuu fariin ii soo dhigay WHATSAPP,isagoo soo raaciyay DIGNIIN.
Waan baryay anigoo u sheegay in aan hayn 5000 euro,wuxuu i yiri tabcan lacagta waad heli kartaa waayo shaqo fiican ayaad YURUB ku haysaa,waxaan iri PIZZA DELIVERY ayaan ka shaqeeyaa,inanta been ayaan u sheegay si aan u barto.
Wuxuu yiri fursad ayaan ku siinayaa soo dir 2000 euro,hadii kale si toos ah ayaan qaraabadaada ugu dirayaa wixii aan kaa duubnay,runtii waxaan is iri u dir 2000 euro,laakiin waxaan ku fikiray hadii aan lacagta u diro sow lagama yaabo in uu igu soo laabto mar kale.
Ka dib waxaa igu soo dhacday in hadii uu qaraabadeyda iyo asxaabteyda FACEBOOK uu u diro isagoon FRIEND ama CONTACT aanu ahayd uu VIDEOWGA aadayo dhanka JUNK,taasoo inta badan aan la arkin,iyo hadii qof uu arko wuxuu is dhihi karaa VIDEO uu soo diray qof aadan aqoon ha furin,waayo waxaa laga yaabaa in VIRUS uu wato ama waxyaabo kale.
Maalintii uu ii qabtay markii la gaaray fariin ayuu ii soo diray isagoo leh,iminka ayaan YOUTUBE gelinayaa VIDIYOWGII,waxaan ugu jawaabay OK GO AHEAD wax lacag ah kuu soo diri maayo.
Ka dib waxaan bedelay FACEBOOK PRIVACY taasoo aan kaga hortagayey in qofna TAG igu sameyn karin isla markaana WALLKA FACEBOOK aan ku leeyahay waxaan ogayn la dhigi karin.
Saacado ka dib wuxuu WHATSAPP iigu soo diray VIDEO LINK oo 5 daqiiqo ah,kaasoo si caadi ah loo arkayo wejigayga iyo anigoo SIIGEYSANAYA,isla markiiba waxaan REPORT u diray YOUTUBE oo ka saaray VIDIYOWGA,marar badan ayuu ku soo celiyay isla markiiba YOUTUBE ayaan dacwo u diray oo hore kaga saaray.
Runtii waxay ahayd dhowr bilood oo nolosheyda ay halis gashay,hadii qaraabadeyda oo ku kala nool YURUB,AMERIKA iyo QALIIJKA ay arki lahaayeen waxaa igu dhici lahayd fadeexada aduunka ugu weyn,laakiin nasiib wanaag arinta siday u rabeen uma dhicin,mar aan weydiiyay maxaa kugu qasbay shaqsi faqiir ah oo waxba aan ahayn in aad sidaan u gashid,wuxuu iigu jawaabay dad aad u tira badan ayaan qaabkan uga shaqeysanaa,waxay u badan yihiin QALIIJKA iyo dadka aan ku tuhuno in ay lacag leeyihiin,waxaad nasiib ku leedahay weli ma aadan guursan,waayo lacagta aan ku weydiinay way ka sii badnaan lahayd.
YAA KA DAMBEEYA ARIMAHA FACEBOOK iyo SKYPE ee DADKA LAGU BAADO?
Arintan SAMIR ku dhacday waxaa laga soo abaabulay magaalada Oued Zem oo ku taala bartamaha MAROOKO,waxay macluumaadka shaqsiga ay doonayaan in ay baadaan ka soo helaan FACEBOOK,ka dibna si toos ah ayay ula xiriiraan,hadii shaqsiga uu ogolaado in VIDEO CHAT uu furo,waxaa isla markii furmaya SOFTWARE u shideysa VIDEO PORN ah ama dumarka qaawan oo INTERNETKA ay ka soo DOWNLOAD gareeyeen,kaasoo qofkii aan si fiican u eegin u maleyn kara LIVE VIDEO ama mid run ah.
Waxay isku aadiyaan qoraalka gabadha kula fadhida iyo kaaga si ay uga dhigaan mid TOOS ah.
Tabcan cod ma jiro,waayo waxaad ku hor SIIGEYSANEYSAA nin kaa duubaya,taasoo lagu sameeyay RAG iyo DUMARBA.
CUMAR oo ku nool magaalada Oued Zem isla markaana ka shaqeysta arimaha aan kor ku soo xusanay ayaa mar wax laga weydiiyay sida ay dadka u baadaan wuxuu BBC u shaagay.
Dhalinyada qaarkood markii ay bixin waayaan lacagta baadka ee VIDIYOWGA laga duubay YOUTUBE la soo dhigo,sida qoraalka hoose ka muuqda waxay ku calaacalaan qoyskooda iyo asxaabtooda.
Sida ugu fudud ee aad isaga ilaalin kartid waa adigoo marnaba aan ka yeelin shaqsi aqoon dheer aadan u lahayn in aad isu qaawisid,hadii kale waxaa kugu dhaceysa arimaha dad aad u farabadan ay ku qabsatay baraha SOCIAL MEDIA oo lacag iyo sharaftoodaba ay kaga luntay.
Baaritaan ay sameeyeen shabakada arimaha noocan ah daba gala ayaa waxay soo ogaadeen in sawirada ay soo xadaan baraha kala duwan ee Social Media,kuwa qaarkood waxaa la soo helay sawirkooda runta ah.